Etu ị ga-esi nwetaghachi orchid ma ọ bụrụ na mgbọrọgwụ akpọrepu ma ọ bụ kpọnwụọ - Osisi - 2020
Etu ị ga-esi nwetaghachi orchid na-enweghị mgbọrọgwụ
Ọdịnaya nke orchids n'ụlọ na-atụ egwu ndị mbido n'ihi egwu nke ọnwụ osisi. N’enye enweghị ahụmịhe, usoro mgbụsị akwụkwọ nke ifuru na-ata ata ma ọ bụ kpọnwụọ. Ma ebe ọ na-arụ ọrụ dị mkpa na ndụ nke ihe ọkụkụ ahụ, mmebi ya na-emetụta ọnọdụ pseudobulbs, akwụkwọ ya na ifuru.
Mana enwere ike, ọbụlagodi ọnwụ nke ọnye orchid kachasị, iji tolite ha site na iji ọtụtụ ụzọ.
Zọ isi ghọta na mgbọrọgwụ nke orchid rere ure
Ngwurugwu nke ala na ura ikuku bu oria nke umu anumanu nke eji ezi nlezianya ma obu mmebi site na ojoo. Usoro a na-ebido, ọtụtụ mgbe, na oge oyi, yana mbelata nke ìhè ụbọchị yana mbelata okpomọkụ.
Ọ bụrụ na elezighị anya na ọnya ndị ahụ siri ike, a ga-agwọ ha. Iji ghọta ma ifuru na-arịa ọrịa ma ọ bụ na ọ dịghị, ọ dị mkpa ịmata ọdịiche dị n'etiti mgbọrọgwụ dị mma na ndị na-emebi emebi. E nwere ọtụtụ ụkpụrụ maka amara ha.
Site na ihe iriba ama di iche iche
Firstzọ nke mbụ bụ mkpebi siri ike site n'ọdịdị n'ozuzu ya na imetụ aka. Ugwu orchid gbasiri nma (aka ekpe) na oruru (nri) nri
Usoro mgbọrọgwụ nke orchid kwesịrị:
dikwa agbanwe agbanwe;
agba ọla ọcha na steeti nkịtị na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mgbe ahịhịa (chloroplasts, ndị isi sonyere na photosynthesis, na-amalite na-enwu site na), na osisi ochie na-acha odo odo ma ọ bụ na agba aja aja;
ezigbo ma na-agbanwe.
Ọ bụrụ na usoro nrụrụ ahụ ebidola, mgbe ahụ ihe mgbaàmà ndị a na-apụta:
agba gbara ọchịchịrị, ọ fọrọ nke nta ka oji;
putara nke na-esi ísì;
ụdị dị ka eri.
A na-ekpebi ịdị mkpa nke mgbọrọgwụ ọ bụghị naanị site na akara ndị dị na mpụga, ọ ga-ekwe omume iwepu osisi ahụ n'ite ahụ, na-emikpu ya na mmiri wee hapụ ya ruo awa 3. A na-eme ka mkpọrọgwụ dị mma na-edozi ahụ, na-enweta ịgbatị na saturation, ma ọ bụrụ na usoro ndị ahụ ka na-agba aka ma na-acha ọcha, mgbe ahụ ha na-ebute ọrịa.
Ihe na-agbanwe agbanwe na mgbọrọgwụ orchid
Iru mmiri dị oke egwu ma ọ bụrụ na agbasoghị iwu ịgba mmiri.
Ọnọdụ na-ezighi ezi, enweghị ìhè.
Ọrịa ọrịa na-emetụta usoro mgbọrọgwụ.
Enweghi oke ikuku oxygen n'ihi ala adighi nma ma obu ihe ndi ozo mejuputara ya.
Ọkụ mere ka fatịlaịza belata ya.
Orchid nwere mgbọrọgwụ akọrọ: akpata
Mgbe ụfọdụ ihe na-eme na-eme ma mkpọrọgwụ nkụ. Ihe kpatara ya bu ihe nlere anya idebe iwu ide mmiri, ma obu mgbe mgbe ahihia enweghi ahihia. Ọ bụrụ na-emezighi ọnọdụ ahụ, ogwe ifuru ga-amalite nkụ, ma akwụkwọ ya.
Nzoputa ohuru nke Orchid
Ọ dị mkpa ịchọpụta ọrịa na mbido mmalite, n'ọnọdụ nke ọ ga-adịrị gị mfe ịtụgharị ifuru.
Ikwesiri ikpebi ogo ire ure. Dabere na nke a, họrọ usoro nke ịlaghachi orchid na ndụ.
Mebiri na obere akụkụ
Ọ bụrụ na naanị ụfọdụ obere ngalaba nke mgbọrọgwụ agabigala ọrịa ma na-etolite usoro ndị ọhụrụ, a na-eji usoro ịgbanwe ọchịchị ahụ:
A na-ewepụ orchid ahụ n'ite ahụ, jiri nlezianya tọhapụ ya site na ịsa ahụ.
Ekpebisiri ike na mpaghara ndị emetụtara, ewepụrụ ha, ngalaba ahụ bụ unyi ma ọ bụ fungicides, Kornevin.
Guzo maka ihicha, dịka iwu, ọ na-ewe awa 3.
Debe osisi ahụ n'ime obere ite (6-7 cm) yana mkpụrụ mejupụtara nke akpaetu na ụrọ gbasaa, ma mepụta ọnọdụ nke dị iche na ntinye mbụ. Ha na-etinye ebe dị ọkụ karịa ma ọ bụ nye ọkụ na-enwu, na-agbatịkwu elekere ụbọchị (opekata mpe awa 12). Ha na-abawanye usoro ọchịchị okpomọkụ (+ 22 ... +25 ° C).
Wedata ya ala dika ala. Can nwere ike ime nke a site na iji mmiri gị banye ite ahụ n’ime mmiri ruo ọkara otu awa, na-ahụ na elu oyi akwa dị oke mmiri, mana mmiri anaghị adịgide na ala.
Mbibi dị egwu
Mgbe ị na-emebi akụkụ dị ukwuu, a na-eji usoro nke na-eto orchid mgbọrọgwụ na ọnọdụ griin haus.
Ntughari uzo mbu di otua na mbu mbu:
A na-ewepụ osisi ahụ n'ite ahụ, a na-egbutu mgbọrọgwụ ya, nke ọma. Mpaghara ndị ọzọ metụtara nwere ike mebie mbọ niile, na-ebute oke mbibi.
Mgbe emechara ngalaba ahụ na fungicides ma ọ bụ unyi. Ọ bụrụ na achọpụtara ebu, a na-etinye ifuru ahụ na ihe adịghị ike nke potassiumganganị maka nkeji 20.
A na-etinyezi ifuru ahụ na arịa pụrụ iche nke nwere ala convex, a na-awụpụ mmiri dị nro n'ebe ahụ ka rosette nke akwụkwọ ghara ibitụ ya aka, akụkụ ahụ na-emikpu n'ime ya. Mgbe mgbe, a na-agbakwunye sirop ma ọ bụ mmanụ a honeyụ na mmiri, a na-eji ihe ọkụkụ na-eme ka ihe ọkụkụ na-eme nri, Kornevin na-agwọ ya.
Mgbe awa 6-7 gachara, a na-ahapụ osisi ahụ ma kpọọ ya nkụ.
Itselfzọ ahụ n’onwe ya mepụtara oghere ekechibido maka ifuru na-arịa ọrịa, ebe carbon dioxide na-akpakọ na-akpali chloroplasts iji mepụta sel ọhụrụ. N'otu oge ahụ, ha na-enye ihu igwe dị mma nke +25 Celsius C na iru mmiri mgbe niile nke dịkarịa ala 70%. Enwere ike ịmepụta ọnọdụ ndị dị otú ahụ site na iji iko iko ọ bụla. Site n'oge ruo n'oge ikpu griin haus. Doured mmiri.
Jide n'aka na ịhazi orchid nwere ezigbo ọkụ dịkarịa ala awa iri na anọ ruo ụbọchị iri na anọ kwa ụbọchị.
Otu ugboro n'ọnwa, a na-enye ha nri (Epin, ngwọta mmanụ a ,ụ).
Usoro okwu ịtụgharị Orchid na omume ka emegharịsịchara
Oge iweghachi ihe ọkụkụ ahụ nwere ike ịdịru otu ọnwa rue otu afọ, ọ bụrụgodi na-emezi ihe niile.
Oge kacha mma iji weghachite ifuru bụ mmiri ma ọ bụ ụbịa. N’oge oyi, enwere ike inwe nzoputa di obere.
Mgbe ihe mpụga nke orchid ahụ na-akawanye mma, mgbe akwụkwọ ya na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na mgbọrọgwụ ọhụụ na-amalite itolite, ha na-akwụsị inye nri ma belata ịgbara ya mmiri.
Gbaso usoro nlekọta abughi usoro na-eri oge, karia ma ọ bụrụ na ọ bụ Phalaenopsis orchid na-edozighi anya, ị ga-elerukwu anya ka osisi ahụ wee nwee ike idozi ihe n'oge.
Maazị Dachnik na-atụ aro: mmụba mgbọrọgwụ n'ime ụmụaka orchid
Enwere ike itinye usoro iji wepụta mkpụrụ na ihe ọkụkụ nke orchids bụrụ na ọ bụrụ na ogologo anaghị apụta na mkpọrọgwụ na ụmụaka n’oge ọmụmụ.
Iji mee nke a, jiri usoro griin hausị ụlọ mee ihe. Yana igwu mmiri na polystyrene n’elu mmiri.
Rootskọ mkpọrọgwụ na orchids bụ usoro dị mfe ma ọ bụghị oge na-ewe oge, ọbụlagodi onye na-enweghị ego nwere ike ịnagide ya, na-edebe naanị iwu.